အခုလိုအခက္ခဲျဖစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဟိုေျပးဒီေျပးျဖစ္ေနလို႕ လႉစရာရွိတာေတာင္ အေႂကြးနဲ႕လႉထားရတယ္ဆိုတဲ့ ပိုင္ၿဖိဳးသု….. – Cele Snap
ပရိတ္သတ္ၾကီးေရ…..ဒါရိုက္တာဏႀကီးနဲ႔ ပိုင္ၿဖိဳးသုတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံေတာ့ လက္ရွိမွာျမန္မာျပည္မွာျဖစ္ေနတဲ့အေရးေတြေၾကာင့္ ဖမ္းဝရံထုတ္ခံထားရေပမဲ့လည္း ဇြဲမေလၽွာ့ဘဲ အျမဲတမ္းတက္ႂကြစြာပါဝင္ေပးေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အြန္လိုင္းေပၚမွာလည္း ေဝဖန္ခံရမႈေတြတစ္ခ်ိဳ႕ရွိခဲ့ေပမဲ့ ေနာက္ မဆုတ္ဘဲ ရဲရဲဝင့္ဝင့္ရွိေနေပးလို႔ ပရိသတ္ေတြရဲ့ အခ်စ္ေတြကို သိမ္းပိုက္ထားနိုင္သူေလး ျဖစ္ပါတယ္. ခုခ်ိန္မွာ ျပည္သူ႔အစိုးရျဖစ္တဲ့ CRPH အတြက္ ျပည္သူတိုင္းက တတ္နိုင္သေလာက္အလႉေငြ ထည့္ေနၾကတာျဖစ္ၿပီး ပိုင္ၿဖိဳးသုတို႔ကလည္း ထည့္ဝင္လႉဒါန္းခ်င္ေပမဲ့ ျဖစ္ေနတဲ့အခက္အခဲကို သူမရဲ့လႉမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာထက္မွာ တင္ထား ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…..ဒါရိုက်တာဏကြီးနဲ့ ပိုင်ဖြိုးသုတို့ ဇနီးမောင်နှံတော့ လက်ရှိမှာမြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့အရေးတွေကြောင့် ဖမ်းဝရံထုတ်ခံထားရပေမဲ့လည်း ဇွဲမလျှော့ဘဲ အမြဲတမ်းတက်ကြွစွာပါဝင်ပေးနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာလည်း ဝေဖန်ခံရမှုတွေတစ်ချို့ရှိခဲ့ပေမဲ့ နောက် မဆုတ်ဘဲ ရဲရဲဝင့်ဝင့်ရှိနေပေးလို့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တွေကို သိမ်းပိုက်ထားနိုင်သူလေး ဖြစ်ပါတယ်. ခုချိန်မှာ ပြည်သူ့အစိုးရဖြစ်တဲ့ CRPH အတွက် ပြည်သူတိုင်းက တတ်နိုင်သလောက်အလှူငွေ ထည့်နေကြတာဖြစ်ပြီး ပိုင်ဖြိုးသုတို့ကလည်း ထည့်ဝင်လှူဒါန်းချင်ပေမဲ့ ဖြစ်နေတဲ့အခက်အခဲကို သူမရဲ့လှူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်မှာ တင်ထား ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုချိန်မှာ ကိုယ်တွေလည်းဟိုပြေးဒီပြေးနဲ့မို့ Visa Card မပြောနဲ့ Mobile banking တောင်သုံးဖို့အခက်အခဲတွေနဲ့ဆိုသော်ငြားလည်း Federal Army ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် CRPH ကိုလှူချင်လွန်းလို့ UK ကအဒေါ်ကိုလှမ်းပြီး$500ဖိုးသမီးအစားလှူပေးပါလို့ ပြောပြီး အကြွေးနဲ့လှူထား တယ် …(အဒေါ်ခမျာScreenshotတွေဘာတွေတောင်မလုပ်တတ်လို့ကိုယ်သင်ပေးလိုက်မှသူ့ဘဏ်ကဖြတ်သွားတဲ့ statementလေးကိုပဲလှမ်းပို့ပေးရှာတယ် ကိုယ်တွေကအဲ့လိုတစ်မျိုးလုံးတစ်ဆွေလုံး tech wizတွေ 🤣)နိုင်ငံခြားကမြန်မာတွေ လှူပေးတာကပိုအဆင်ပြေမယ်ထင်တယ် ဒီမှာကလူတိုင်းမှာ Visa cardမရှိကြဘူ းဆိုတော့
လူနာမ်ားတင္ဖို႔အတြက္ ကားအဆင္မေျပျဖစ္ေနတဲ့ အသင္းကို ကားတစ္စီးလႉဒါန္းရန္ သူကိုယ္တိုင္ (၁၀) က်ပ္မတည္လႉဒါန္းခဲ့တဲ့ ေအး၀တ္ရည္ေသာင္း…..